PLAY စစျေးကွက်အတွက် UPDATED မဟုတ် APPLICATIONS များ - MARKET က PLAY - 2019
Play Store ကိုအပေါ် troubleshooting မွမ်းမံ applications များ
ငါတို့သည်သင်တို့၏ domain မှမေးလ်ပြုပါ
အဓိကစိန်ခေါ်မှုများတစ်ခုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်ဆက်လက်မလုပ်ဆောင်ခင်ဤဆောင်းပါးကိုသာအလွယ်တကူဆိုပါတယ်နှင့်အရေးအကြီးဆုံးကတော့ကြောင့်ညာဘက်လုပ်ပေးလျက်ရှိသည်အဘယျသို့နားလညျနိုငျသောသူတို့အားလူများအတွက်ရည်ရွယ်ပါသည်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအပေါ်ကြိုတင်စာရင်းလုပ်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ သငျသညျအငျတာနကျပျေါကွဲပြားခြားနားသော domains များနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်အတွေ့အကြုံမရှိကြပါဘူးလျှင်, သင်သည်များစွာသောအခက်အခဲများကြုံတွေ့ရဖွယ်ရှိဖြစ်ကြသည်။
တစ်ဦးစာတိုက်ပုံးတစ်မူထူးခြားတဲ့ site ကိုနာမတျောကိုချိတ်ဆက်ဖို့, ကရွေးချယ်စရာအများဆုံးအရေအတွက်အားနဲ့ top-level domain ရှိသည်ဖို့နှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်ခြွင်းချက်ရှိပါတယ်။
ဆိုက်၏အမည်ကို အသုံးပြု. အရှိဆုံးအလားအလာမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုဝေးနေဖြင့်ကုမ္ပဏီ Yandex ကနေမေးလ်ကြောင်းသတိပြုပါ။ ဤသည်တို့ကြောင့်အလုံးစုံကိုအလွယ်တကူ domains များချိတ်ဆက်ဝယ်လိုအား, အဖြစ်လုံးဝအခမဲ့ကြောင့်, ဒါပေမယ့်န်ဆောင်မှုများ၏အရည်အသွေးရန်ဖြစ်ပါသည်။
Yandex ၏စာတိုက်ဝန်ဆောင်မှုဆိုဒ်၏ကိုယျပိုငျနာမတျော၏ပိုင်ရှင်အဖြစ်သင်တို့အဘို့အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းပါပဲ။ အထူးသဖြင့်ကြောင့်ကုမ္ပဏီ webhosts ၏ကျယ်ပြန့်အများစုနှင့်ပတ်သက်ပြီးအပြုသဘောဆောင်ကြောင်းတကယ်တော့နှင့်လုပ်ရတဲ့-အခမဲ့ရန်သင့်အား e-mail, များအတွက်အမည်များပူးတွဲခွင့်ပြုပါတယ်။
Yandex ပိုင်ရှင်အဖြစ်သငျသညျအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ရှိသည်သောကျော်သူတို့အား domains များနှင့်အတူသာအလုပ်လုပ်သည်။
Read more: Yandex.Mail သုံးပြီးဒိုမိန်းနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ကိုဘယ်လို
သင်ပေးထားသောအဆက်အသွယ် link ကို အသုံးပြု. ဆိုက် Yandex ၏အထူးစာမျက်နှာကိုသွားဖို့လိုပါတယ်ပထမအဆင့်။
တစ်ဒိုမိန်းကွန်နက်ရှင် Yandex မှတဆင့်စာမျက်နှာဤနေရာသို့သွားရန်
နောက်တကြိမ်စဉ်းစားမေးလ်ဝန်ဆောင်မှု၏အားသာချက်များကိုရည်ညွှန်းစာသားပိတ်ပင်တားဆီးမှုဖတ်ပါ "အဘယ်ကြောင့် Yandex.Mail ဒိုမိန်း" ဖွင့်စာမျက်နှာ၏အောက်ခြေတွင်။
စာမျက်နှာ၏အလယ်ဗဟိုမှာအရေအတွက်ရှာတွေ့ "ဒိုမိန်းအမည်" နှင့်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးက်ဘ်ဆိုက်၏ဒေတာများနှင့်အညီပြုလုပ်ဖြည့်ပါ။
ခလုတ်ကိုသုံးပါ "ဒိုမိန်း Add" သတ်မှတ်ထားသော text field ထဲမှာအနီး။
မှတ်ပုံတင်သင်သည်သေချာပေါက် Yandex မေးလ် logged in ဝင်သောခံရဖို့ရှိသည်သတိပြုပါ။
မှတ်ပုံတင်ခင်မှာသင့်ရဲ့ site ကိုများအတွက်သင့်လျော်သောဖွစျလိမျ့မညျသောအသုံးပြုသူအမည်နှင့်အတူသစ်တစ်ခုစာတိုက်ပုံးအတွက်လုပ်ငန်းစဉ်ဖျော်ဖြေဖို့အကြံပြုသည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်, ထို domain name ကိုသင့်ရဲ့အဓိကရဲ့ login ချိတ်ဆက်ပါလိမ့်မည်။
Yandeks.Pochte အပေါ်အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးနည်း: ဆက်ဖတ်ရန်
ပထမဦးဆုံးအရာ logging ပြီးနောက်သင်မြင်အသိအမှတ်ပြု၏မရှိခြင်း၏အသိပေးစာဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ site ကိုမှနျစာတိုက်ပုံး attach လုပ်ဖို့, သငျသညျအပိုင်းတွင်သတ်မှတ်ထားသောလိုအပ်ချက်များဖြည့်ဆည်းရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည် "အဆင့် 1".
အဆိုပါရွေးချယ်မှုကိုသင် MX-မှတ်တမ်းများကို configure သို့မဟုတ် Yandex မှဒိုမိန်း၏ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဖျော်ဖြေဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။
လိုအပ်ချက်များ၏ပိုကောင်းတဲ့နားလည်မှုငါတို့သည်မေးလ်ဝန်ဆောင်မှု Yandex မှ Built-in ညွှန်ကြားချက်ကို အသုံးပြု. အကြံပြုပါသည်။
သင်သည်မည်သည့်အမှားအယွင်းများရှိပါက Yandex ၏ဝန်ဆောင်မှုလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အားလုံးကိုသင့်ရဲ့ဒိုမိန်း settings ကိုပြန်စစ်ဆေးပါ။
နိဂုံးချုပ်အပေါငျးတို့ထကျပါလုပ်ရပ်များအတွက်, သင်သည်သင်၏ဒိုမိန်းနှင့်အတူ Yandex အပေါ်တစ်ဦးအပြည့်အဝ post ကိုရလိမ့်မယ်။ နယူးအသုံးပြုသူမှမေးလ်ပို့နိုင်ပါလိမ့်မည်သည့်လိပ်စာ, နှင့်ပေးထားသောသယံဇာတအပေါ်ခွင့်ပြုချက်အတွက်အသုံးပြုအောက်ပါဖွဲ့စည်းပုံမှာရပါလိမ့်မယ်:
ရဲ့ login @ ဒိုမိန်း
အားလုံးနောက်ထပ်လုပ်ရပ်များတိုက်ရိုက် Yandex မှသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒိုမိန်းနဲ့အီးမေးလ်အကောင့်ဆက်တင် related ကြသည်အတိုင်းဤမှာဒီလက်စွဲ, ပြီးစီးခဲ့နိုင်ပါသည်။
ကုမ္ပဏီ Mail.ru ထံမှရုရှားစာတိုက်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အချို့သောလူများအတွက်ဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ပြီး, ကျော်ကြားမှုအတွက်ပထမဦးဆုံး။ သငျသညျကိုခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်အဖြစ်ထို့ကြောင့်,, အီးမေးလ်အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်အဆိုပါလုပ်ဆောင်ချက်ကိုသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒိုမိန်းနှင့်အတူဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Mail.ru Yandex, တာဝန်ခံအဖြစ်အခမဲ့, အများကြီးယုတ်ညံ့ဖြစ်ပါသည်အားလုံးဖြစ်နိုင်ခြေဖြစ်သည်။
သင်ပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအရာ - link ကို အသုံးပြု. အထူး Mail.ru စာမျက်နှာပေါ်တွင်သွားကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဒိုမိန်းကွန်နက်ရှင် Mail.ru မှတဆင့်စာမျက်နှာဤနေရာသို့သွားရန်
အပိုင်းအထူးကိစ်စတှငျ, စီမံကိန်း၏အဓိကအပိုင်းဂရုတစိုက်ဖတ်ပါ "အခွန်စည်းကြပ်".
လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဒိုမိန်းဆက်သွယ်မှုအပြင်, သငျသညျအခြို့သောအပိုဆောင်း features တွေကိုသုံးနိုင်သည်။
ပိတ်ပင်တားဆီးမှုဖွင့်ဖို့စာမျက်နှာ scroll "Mail.ru သင့်ရဲ့ဒိုမိန်းချိတ်ဆက်ပါ".
စာသားအကွက်တွင်များအတွက်နောက်တစ်နေ့တည်နေရာ, သင့်ရဲ့ site ကိုတစ်မူထူးခြားတဲ့နာမည်ထည့်နှင့် button ကိုအသုံးပြုနိုင်သည် "ချိတ်ဆက်ပါ".
Next ကိုသင်သက်တမ်းသတ်မှတ်ထားသော domain name ကို၏အတည်ပြုချက်ကိုဖျော်ဖြေဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဦးစားပေးနှင့် site ပိုင်ဆိုင်မှုအသိပညာလမ်းညွှန်မှုကိုခံယူသောဘွဲ့နာမဖို့အခွင့်အရေးအတည်ပြုချက်ကိုအမျိုးအစားကိုရွေးပါ:
DNS ကို-Check - သင်ဘ်ဆိုဒ် hosting ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလျှင်,
HTML ကို-file ကို - ဆိုက်ထားပြီး hosting အတွက်ပေါ်နေရာချခြင်းနှင့်တက်ကြွစွာဖြစ်ပါသည်လျှင်,
META-tag ကို - လည်း Real-time က်ဘ်ဆိုက်များအတွက်အလုပ်လုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသည်။
မေးလ်ဝန်ဆောင်မှုရန်သင့် site ၏ဒိုမိန်းနာမည်များပူးတွဲပြီးသွားချိန်သင် MX-မှတ်တမ်းများများအတွက် setting များကိုလျှောက်ထားရပါမည်။
site ကို Mail.ru. အပေါ် Panel ကို maildomain ထိန်းချုပ်ကိုသွားပါ
တက်ကြွစွာ window ကိုကို web browser ၏လက်ဝဲဘက်ခြမ်းတွင်နှင့်သွားလာမှု menu ကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုကိုရှာဖွေ "န်ဆောင်မှုများ" အပိုင်းတိုးချဲ့ "မေးလ်".
နောက်ကျောကသင်၏ဒိုမိန်းသွားပြီးအဆိုပါစီမံကိန်းများ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ MX-စံချိန်ကို configure ။
အားလုံးခြယ်အကြံပြုချက်များပြီးသွားချိန်ကလစ် "အားလုံးမှတ်တမ်းများ Check" စာမျက်နှာ၏ထိပ်သို့မဟုတ် "အခု Check" တိကျတဲ့ MX-စံချိန်နဲ့ပိတ်ပင်တားဆီးမှု၌တည်၏။
ကြောင့်အောင်မြင်သောဆက်သွယ်မှုမှသင်ခံရပြီသော domain name ကိုမှ e-mail, ကိုသုံးနိုင်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, Mail.ru ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစီမံကိန်းတစ်ခုအပိုဆောင်းက်ဘ်ဆိုက်များဖြည့်စွက်၏စည်းကမ်းချက်များ၌သင်တို့ကိုကန့်သတ်မထားဘူး။
အထက်ပါဆွေးနွေးတင်ပြနှစ်ခုမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုဆနျ့ကငျြ, Gmail ကို site ကို Google ၏ system ကိုတက်ကြွစွာအသုံးပြုသူများကိုပိုပြီးအာရုံစိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကကုမ္ပဏီ၏ကလေးသည်စီမံကိန်းများအားလုံးနီးကပ်စွာဆက်နွယ်နေနေကြတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောင့်ဖြစ်သည်။
မေးလ်အကောင့်ရာကို Google ဒိုမိန်းက်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ သင့်ရဲ့ website မှာခညျြနှောငျဖို့သတိထားပါ!
Google ကတခြားစီမံကိန်းများတွင်အတိုင်း, သင်တို့၏ e-mail, ဒိုမိန်းချိတ်ဆက်ပြီး, သငျသညျအခြို့သောပရီမီယံ features တွေကိုသုံးနိုင်သည်။
Google ထံမှစီမံကိန်း, G Suite ရဲ့ home page ကိုသွားပါ။
ကို Google ဒိုမိန်းကွန်နက်ရှင်စာမျက်နှာကိုသွားပါ
ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ဒီမှာ Start"ဒီစာမျက်နှာ၏ထိပ် panel ကို၏ညာဘက်အခြမ်းတွင်တည်ရှိသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်ဤအခွင့်အလမ်းများကို၏အသုံးပြုမှုကိုအခကြေးငွေဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ 14 ပြက္ခဒိန်ရက်ပေါင်းတစ်ဦးစမ်းသပ်ကာလနှင့်အတူ။ အကြောင်းကြားစာဒီလိုမျိုးတွေနဲ့တစ်ဦးကစာမျက်နှာ, ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ "Next ကို".
မဆိုနောက်ဆက်တွဲအရေးယူမှုသူတို့အားသို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောအခါ, တစ်ဦးစံမှတ်ပုံတင်ရေးကဲ့သို့သောအခြားဒေတာ, ရိုက်ထည့်ရန်သင့်အားလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
မှတ်ပုံတင်မတယောထိုအချိန်တွင်သင်သည်သင်၏ site ၏ဒိုမိန်းရိုက်ထည့်ရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။
သင့်ရဲ့စာတိုက်ပုံးကို set up အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက်ဒိုမိန်းအတည်ပြုပါ။
အနာဂတ်နိမိတ်လက္ခဏာကို-in ကိုစီမံကိန်း, G Suite အပေါ်များအတွက်ဒေတာနှင့်အတူနယ်ပယ်များတွင်ဖြည့်ပါ။
နောက်ဆုံးအဆင့်က Antibot ခုနှစ်တွင်စစ်ဆေးသွားပါ, အဲဒီနောက်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Accept နှင့်အကောင့်ကိုဖန်တီး".
သငျသညျလုပ်ရပ်များလုပ်ဆောင်နှင့်အခြေခံဖြစ်ကြသေးနောက်ထပ်ပေါ်နေချိန်မှာသင်တစ်ဦးထက်ပိုသော In-depth configuration ကိုဝန်ဆောင်မှုဖျော်ဖြေဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။
မှတ်ပုံတင်ပြီးပါကပြီးနောက် button ကို click "setting ကိုသွားပြီး".
သင့်အကောင့်ကနေယခင်ကစာရင်းဒေတာကို အသုံးပြု. ဒိုမိန်းစီမံအုပ်ချုပ်သူကိုရဲ့ console ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
သငျသညျအသုံးပြုတဲ့ domain name ကို၏ပိုင်ဆိုင်မှုကိုအတည်ပြုရန်လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်မည်အခြေခံ configuration ကိုအပြီးသတ်ဖို့။ သင်ကဆက်တင်များဖြင့်ထောက်ပံ့ညွှန်ကြားချက်ပေါ်မှာဤလုပ်နိုင်ပါတယ်။
သင်တို့ရှိသမျှသည်အချက်တွေကိုနှင့်အတူပြီးဆုံးပါပြီသောအခါ, ခလုတ်ကိုကိုသုံးပါ "ဒိုမိန်းများ၏ပိုင်ဆိုင်မှုအတည်ပြုခြင်းနှင့်မေးလ် configure လုပ်ဖို့".
သငျသညျဆောင်းပါး၏ဤအပိုင်းကိုဖြည့်စွက်နိုင်အောင်ထပ်မံလုပ်ရပ်များ, သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဦးစားပေး, မပေးညွှန်ကြားချက်အပေါ်အခြေခံထားတယ်။
ကံမကောင်းစွာပဲ, ရက်စွဲခြင်းငှါ, စာတိုက်ဝန်ဆောင်မှုကော်ပိုရေးရှင်းကအီးမေးလ်ကိုဖန်တီးရန်မည်သို့ Rambler ပွင့်လင်းဖြစ်နိုင်ခြေမပေးပါဘူး။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ဝန်ဆောင်မှုသူ့ဟာသူမိတ်ဆက်ခံရဖို့အခွင့်အလမ်းဖြစ်စဉ်းစားအနာဂတျမှာ options နဲ့ဖွယ်ရှိတစ်ခုကျယ်ပြန့်စာရင်းထဲမှာပါတယ်။
သငျသညျမွငျနိုငျသကဲ့သို့, ဒိုမိန်းက e-mail ကိုလုပ်ပေးသင့်ရဲ့ဦးစားပေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေးစွမ်းရည်အပေါ် မူတည်. နည်းလမ်းများစွာအတွက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, created သို့မဟုတ်လုံခြုံဒိုမိန်းတစ်ခုတည်းစီမံကိန်းတွင်တစ်ခါသာရရှိနိုင်ကြောင်းကိုစိတ်တွင်စောင့်ရှောက်လော့။
ဗီဒီယို Watch: ACCESS BARS İle Hayatınız NASIL Tamamen Değişir? Kişisel Gelişim (စက်တင်ဘာလ 2019).